WPide: Plugin amin'ny famoahana rakitra mahafinaritra ho an'ny WordPress | Martech Zone
Alahady, Septambra 22, 2013 Asabotsy, Septambra 21, 2013 Douglas Karr
Indraindray dia manana mpanjifa ianao izay manidy ny lozin'izy ireo amin'ny ambaratonga mampihomehy. Manana mpivady roa foana izahay satria miasa ary angamba manao toy izany koa ny mpiasan'ny IT. Mahasosotra… tokony ho eo ny teknolojia ahafahana mamela anao fa tsy hampiato anao. Ny tsy fahaizana manitsy zavatra ifotony toy ny rakitra lohahevitra dia mety hahasosotra. Anio alina aho dia nanana asa toy izany… sy ny fahasosorana amin'izany.
Ho solon'ny fifandraisana amin'ny alàlan'ny FTP na SFTP, dia nitady mpitantana rakitra iray tao anaty plugin iray tao amin'ny WordPress aho. Nitsapa plugins tokony ho am-polony aho ary tonga teny ampitan WPide… Wow. Tsotra dia maty tokoa… hazo fampirimana ankavanana ary editor iray ankavia. Izany no tokony ho endrik'ilay mpampanonta anatiny ao amin'ny WordPress! Ny Editor dia manana laharana isa sy kaody miloko hanamora ny raharaha.
Ny sasany aminareo dia mety ho eo ambadiky ny fiarovana ary mieritreritra ny zavatra ataoko dia voanjo… manome plugin iray izay miditra amin'ireo rakitra rehetra ao anaty WordPress amin'ny Administratera rehetra? Eny… ny Administratera dia afaka manindry ny famafana lohahevitra iray toy ny tsindry azon'izy ireo tsindriana ny fanovana an'ity mpamoaka lahatsoratra ity… na ny tonian-dahatsoratra default. Ny olana amin'ny tonian-dahatsoratry ny tsy fampiasa dia ny tsy fananany hazo fisie hikarohana mandra-pahatonganao any amin'ireo rakitrao.
Tags: manova rakitraplugin pluginrakitra hierarchymanager managermpitantana pluginhazo fisieWordPressrakitra fanovana wordpressplugin WordPress